मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई नगर प्रमुख पाण्डेले किन भेटे ? - Tulsipur Khabar मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई नगर प्रमुख पाण्डेले किन भेटे ? - Tulsipur Khabar
२०७५ चैत्र ७, बिहीबार
मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई नगर प्रमुख पाण्डेले किन भेटे ?
तुलसीपुर,२३ साउन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डले ५ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई भेटेर तुलसीपुरको विकासका वारेमा कुरा राखेका छन् । भेटका क्रममा नगरप्रमुख पाण्डेले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई गुरुकुल आश्रमका साथै वैदिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्नका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सो अवसरमा नगरप्रमुख पाण्डेले सँस्कृत विश्वविद्यालयको खाली जग्गालाई गौशालाका रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।
उनले तुलसीपुरमा निर्माण हुन लागेको तरकारी तथा फलफुल वजार,मिट मार्ट,आधुनिक वधशाला, वसपार्क, विभिन्न पार्क लगायतका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले तुलसीपुरको विकासका लागि आफु प्रतिवद्ध रहेको वताउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कमी नहुने वताएका थिए ।
‘प्रदेश सरकारले आवश्यक वजेटका लागि कुनै पनि कन्ज्युस्याई गर्ने छैन ’ मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने । उनले तुलसीपुरलाई संस्कृत विश्वविद्यालयलाई आयुर्वेदको हवका रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको समेत वताएको नगरप्रमुखका प्रेस संयोजक वसन्त आचार्यले जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा उपप्रमुख माया शर्मा र नेकपाका नेता शोभाराम वस्नेतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
आज दाङ सहित तराई क्षेत्रमा हर्सोउल्लासका साथ होली पर्व मनाईदै
विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही
पहाडी जिल्लामा आज फागु पर्व मनाइँदै
एउटै कक्षामा ५ निरीक्षक, परीक्षा हलमा फोटो सेसन
परीक्षा हलमा उपमेयरको सेल्फी
दाङमा बालविवाह गर्ने युवकका विरुद्ध करणीको मुद्दा
दाङका विकट वडालाइ एम्बुलेन्स उपहार
तुलसीपुरमा हतियार सहित एक पक्राउ
सहकारी संस्थाको भवन सिलान्यास
दंगीशरणमा गाउँपालिका स्तरीय अर्धबार्षिक समिक्षा सम्पन्न
वडा स्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी चिराघाटमा सम्पन्न